Kordhinta guud ee ku saabsan ukumaha "Universal-55"
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo wax-ku-ool ah (oo ka mid ah noocyada waaweyn) waa Universal-55. Hawlgalkeeda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kobciso badan oo wax soo saar leh iyo cunnooyin caafimaad leh. Intaa waxaa dheer, dayactirka cutubkan inta lagu jiro hawlgalku uma baahna ilo badan oo dad ah, taas oo si weyn u kaydisa lacagta.
Faahfaahinta xariirka ee ukunta ee ukunta Nest 200
Ku dhawaad ​​qof kasta oo ku lug leh digaagga, ayaa la kulmay su'aasha ah ee uu ku baxayo. Ka dib markii dhan, haddii aan ka hadlayno boqolaal ukun, way ku adag tahay chicks si ay ula qabsadaan tiro badan. Si loo fududeeyo hawshan oo loogu yeero isweydaarsiyo casri ah oo casri ah. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa Nest-200, kaas oo kuu ogolaanaya inaad abuurto noocyada dhalinyarada ee noocyada kala duwan ee shimbiraha.
Kordhinta sheeko loogu talagalay ukumaha "Kvochka"
Waqti ka waqti, milkiilayaasha digaaga ayaa ka fekeraya automating geeddi-socodka ukunta. Habkani wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan: Tusaale ahaan, Beelasha casriga ah ee badan ee digaagga ayaa laga saaray dareenka waalidka mana awoodi karin inay si buuxda ugu fariistaan ​​ukumo muddo go'an. Si kastaba ha noqotee, iibsashada kiniisad badan oo badan ayaa lagu soo celiyaa tixgelinnada noocaas ah: qiimaha sare ee qalabka, kakanaanta hawlgalka iyo kuwo kale.
Egger 264 Qeybta Kufsiga ee Egg
Beer kasta oo digaag xun oo degdeg ah ama gadaal ah ayaa wajahaya baahida loo qabo in lagu iibsado kululeeyaha. Mid ka mid ah qalabka si fiican loo xaqiijiyey waxaa loo yaqaan Egger 264. Qodobkani waxa aanu tixgelinaynaa sifooyinka qalabkan, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka. Tilmaanta Beeraha Tiknoolajiyada ee Ruushka ee loo yaqaan 'Ruush-made' ayaa loogu talagalay inuu jaro digaag digaaga.
Kordhinta guud ee hibada ee ukunta "Stimulus-4000"
Si aad u hesho tarbiyadda guul leh ee digaaga oo aad u sarreeya, isticmaalka qalabka wax soo saaridda waa qasab. Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kordhiso wax ku oolnimada iyo faa'iidada sheyga shimbiraha, damaanad qaadka soo saarista farcankiisa, ka badbaadi waqti badan. Mid ka mid ah qalabkan wax soo saarka gudaha waa stubul-4000 oo ah unugyada caalamiga ah, taas oo aan ka sii darneyn kuwa ka dhoofiya.
Faahfaahinta qiyaasta ukunta ee ukunta "IFH 500"
Wixii beeraha ku hawlan beerashada digaagga, kobcinta ukumaha waa qalab aad u muhiim ah oo waxtar leh oo hoos u dhigaya kharashka wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad ku hagaajiso dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha. Mid ka mid ah moodooyinka lagu soo bandhigo beeralayda suuqa ee hadda jira waa "IFH 500". Qeexida Qalabka waxaa loogu talagalay tarbiyadda cagaarka ah ee digaaga dhalada: digaagga, berriga, boodhka, shimbiraha, iwm.
Sheeko guud oo loogu talagalay ukumaha "Universal 45"
In beerashada digaagga casriga ah, qaboojinta ukunta waa mid muhiim u ah. Iyadoo geedi socodku si weyn u kordhiyo wax soo saarka ukunta digaaga ama jihada hilibka. Maanta waxaan ka wada hadli doonaa habka Isku-xirka Universal-45. Qeexid Qaabka "Universal" ayaa la sameeyay waxaana la geliyay wax soo saarka Ururka Midowga Soofiyeedka, oo ka tirsan warshadda Pyatigorsk.
Dib-u-eegis xeeldheer loogu talagalay ukumaha "TGB 140"
Muhiim maaha haddii aad ku shaqeyneysid guri, beero, ama beerashada digaaga marka ay timaado hannaanka guuleysiga iyo hufnaanta ee jiil cusub oo digaag ah. Dabcan, habka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa mid dabiici ah, taas oo ah, caawimaadda digaagga. Laakiin haddii aan ka hadleyno cabir weyn, ka dibna wax ka wanaagsan maahan in la helo kulubo khaas ah oo si weyn u fududayn kara qaddarka maaha keliya ee hen, laakiin sidoo kale adiga, sababtoo ah kuleylaha ayaa kuu qaban doona wax kasta.
Dib-u-eegis xeeldheer loogu talagalay ukumaha "TGB 280"
Nafaqeynta digaaga ayaa waxaa gacanta ku haya beeraha waaweyn iyo kuwo yar yar. Hawlgalkani wuxuu ubaahan yahay in sanadlaha la kordhiyo dadwaynaha baaluqa, waayo qalabkan ayaa loogu talagalay in lagu daro ukumaha shimbirta ee ugu fiican. Mid ka mid ah qalabkan waa qandaraasle TGB-280. Aan eegno muuqaalada qalabkani, ogow inta jeer ee qalabka qalabku "ku shubo" inta lagu jiro halbeegga.
Faahfaahinta soo-saaraha gudaha ee ukunta "Ryabushka 70"
Haddii aad rabto in aad lakabdo chicks, iyo digaagga waxaa si liidata loo muujiyey ama ma jirto dareenka inkubad, ka dibna aadan samayn karin iyada oo aan kobcin. Qalabkan gaarka ah wuxuu kaa caawin doonaa abuuritaanka xaalado ku habboon ukunta bacrimiya ee ay ku jirto balaastigga qaangaadhka ah. Mid ka mid ah kulubka noocan oo kale ah "Ryabushka-70" - waxaan ka wada hadli doonnaa arrintaas.
Dib-u-eegis xeeldheer loogu talagalay ukumaha "TGB-210"
Hadafka ugu muhiimsan ee beeraleyda digaaga ayaa ah heer aad u sarreeya oo laysku tallaalayo cunno caafimaad leh oo xoog leh taasoo ka dhalatay ukunta is-dhalashada, taas oo aan macquul aheyn in lagu gaaro iyadoon la isticmaalin khubaro tayo leh. Waxaa jira noocyo badan oo ah qaboojiyeyaasha, kuwaas oo ku kala duwan hawlaha, awoodda iyo dabeecadaha kale ee gaarka ah, taas oo u oggolaanaysa inay kala soocaan qalabka kale ee la midka ah.
Dib-u-eegid soo-qaboojiye loogu talagalay ukunta "Neptune"
Hadday noqoto in ukunku ku guuleysto guriga wuxuu ku xiran yahay qaabka farsamada. Taas awgeed waxaad u baahan tahay qalab fiican. Kombuyuutar "Neptune" wuxuu isu taagay qalab lagu kalsoon yahay oo loogu talagalay shimbiraha gudaha iyo xitaa duurjoogta. Dib u eegista macaamiisha wanaagsan ayaa bixiyay sumcad wanaagsan.
Faahfaahinta qiyaasta "AI-48": sifooyinka, awoodda, barashada
Kordhinta ukumaha ee guriga waa ganacsi faa'iido leh, laakiin iyada oo aan la isticmaalin qalab gaar ah waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan. Isku-xiraha yar-yar ee si toos ah guriga ayaa noqon doona caawiye weyn ee beeraha digaaga, gaar ahaan ilaa maanta qalabka noocan oo kale ah ayaa loo heli karaa qof walba. Isku-xirka AI-48 waa wakiil caadi ah.
Hawo-qaboojiye: Sidee ayuu u saameeyaa hargabka, sida loo sameeyo naftaada
Si aad u hesho boqolkiiba boqol oo dherer ah oo ukumo ah oo ku yaalla naqshad, waxaa lagama maarmaan ah in lagu bixiyo xaaladaha ku habboon gudaha qalabka, sida qoyaanka iyo heerkulka hawada. Laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo saameynaya geeddi-socodka maskaxda, kuwaas oo ka mid ah meel gaar ah waxaa lagu hayaa hawo-qaadasho.
Dib-u-eegista masiibada ee ukunta "Ryabushka 130"
Iibsashada guri-qaboojiye guri ayaa badalaya mulkiilayaasha digaaga ee digaaga waxayna kuu oggolaaneysaa in aad ka hesho 90% oo farac ah. Sida laga soo xigtay dib u eegista, haddii beeralayda uu leeyahay ujeedo ah digaagga, ka dibna wuxuu noqon doonaa maalgelin wanaagsan, kaas oo bixin doona 2-3 jeer isticmaalka. Qalabka kala duwan ee digaagga taranta maanta waa weyn.
Faahfaahinta aragti-qabe loogu talagalay ukumaha "Janoel 24"
Digaagga gudaha waa laan la jecel yahay beeraha, digaaga ayaa u koray hilibka iyo ukunta. Taasi waa sababta beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay ay xiiseynayaan iibsashada kuleylaha la isku halleyn karo, oo aan qaali ahayn oo fudud. Ilaa hadda, qalab badan oo lagu xakameynayo digaagga ayaa ku jira iibka, laakiin waxaan si faahfaahsan uga fiirsan doonaa dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka "Janoel 24"
Waa maxay heerkulku waa inuu ku jiraa kuleylaha
Nafaqada dabeecadda ah ee xayawaanka yaryar ee ku jira masawirada ayaa si ballaaran loo isticmaalaa qoysaska iyo beeraha. Si loo xakameeyo shaqadiisa iyo calaamadaha loogu talagalay jiilka qofka shakhsiyaadka ah waa hawsha martida wanaagsan. Hordhac Dhimista dhallinyarada iyo caafimaadkooda (oo ku xiran isticmaalka kiniini) waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin sida wanaagsan ee heerarka kuleylka iyo qoyaanka loo aasaasay loona hayo, caadooyinka hawo-qaadashada iyo u jeedooyinka ilamaha la filayo ayaa la arkay.
Kulanka ugu horreeya, IPS-10 Cockerel, ayaa la sameeyey bartamihii 80aadkii, tan iyo markaasna qaabkani ma uusan luminin sumcaddii beeraleyda digaaga. Sanadihii la soo dhaafay, qalabka ayaa casriyeysey, taas oo ka dhigaysa mid aad u habboon oo wax ku ool ah. Waqtigan xaadirka ah, qaabka waxaa laga sameeyey sanduuqyada sandwich, taas oo damaanad qaadaysa maqnaanshaha dusha sare ee darbiyada gudaha ee kuleylaha.
Dib-u-eegista qandhada ee ukunta "Nest 100"
"Nest" waa soosaar casri ah oo soo saara badeecooyin cusub oo loogu talagalay beerashada digaaga ee xirfadlaha ah iyo hiwaayadda. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan waa Nubu-ka-qaboojiyaha (Naf-dhiska) ayaa muujinaya tirada tirada "digaaga" ee ku xeeldheeraha). Qalabkani wuxuu ku haboon yahay beeraha digaagga, iyo isticmaalka guriga.
Suuqa waxay bixisaa tiro badan oo ah kuwa gudaha iyo dibedda laga keeno, kuwaas oo la mid ah mabaadi'da guud, laakiin waxay si aad ah ugu kala duwan yihiin dhinacyo badan. Maqaalka, waxaad ka baran doontaa waxa ku jira incubator AI-192, sida ay u kala duwantahay iskudhafka, waxa shaqadoodu tahay, iyo sidoo kale waxa loo aaneyn karo xoogga iyo liidashada qalabka.